हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, संवाददाता July 8, 2021
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठ्माण्डौ। इंग्ल्याण्ड, जारि यूरोकपको फाइनलमा प्रवेस गरेको छ। आज बिहान सम्पन्न भएको खेलमा इंग्ल्याण्डले डेनमार्कलाइ २-१ गोलकोअन्तरले हराएको हो। उक्त खेलमा पहिलो अग्रता भने डेनमार्कले लिएको थियो।
डेनमार्कका लागि मिकेल क्रोघ डेम्स्गार्डले खेलको ३०औ मिनेट मा उत्कृष्ट फ्री किक गोल गर्दै महत्वपूर्ण अग्रता दिलाएका थिए । ३९औ मिनेटमा डेनमार्कका खेलाडी क्जारको आत्मघाती गोलका कारण खेलमा बराबरीको मोड आएको थियो। ९० मिनेटको निश्चित समयमा दुवै टिमले अग्रता लिन नसक्दा, खेल अतिरिक्त समयमा धकेलिएको थियो।
९० मिनेटमा निर्णय हुन् नसकेको उक्त खेलको १०४ औ मिनेटमा ह्यारी केनले गोल गर्दै इंग्ल्याण्डलाइ महत्वपूर्ण अग्रता दिलाएका थिए, जसले इंग्ल्याण्डको फाइनल पुग्ने सम्भावनालाइ बलियो बनायो।
इंग्ल्याण्डका लागि सर्बाधिक गोल गरेका केनले आजको खेलमा पनि महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए। उनको गोल इंग्ल्याण्डको जितको कारण बनेको थियो। उनले यस युरोकपमा ४ गोल गरिसकेका छन्। डेनमार्कले यसपाली सबैलाइ चकित पर्दै यूरो २०२० को सेमी फाइनलसम्म को यात्रा तय गरेको थियो।
England advances to the Finals of Euro Cup 2020/ Credit Euro 2020
डेनमार्कका स्टार खेलाडी क्रिस्टियन एरिक्सन यसै यूरोमा फिनल्याण्ड संगको खेलमा फुटबल फिल्ड मै लडेका थिए र डेनमार्कको यो यूरो प्रस्तुति हेर्दा लग्थियो कि डेनमार्कका हरेक खेलाडी एरिक्सन कै लागि खेलिरहेका छन् । डेनमार्कका खेलाडी हरुमा छुट्टै उमङ्ग थियो , एक अलग उर्जा थियो । सबैको मन जित्न सफल यस डेनमार्कको टिम को प्रदर्शन तारिफ योग्य रहेको थियो। खेलको १०३औ मिनेट इंग्ल्याण्डले पाएको पेनाल्टीमा धेरै प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।
इंग्ल्याण्डका खेलाडी रहिम स्टर्लिङ्ग पेनाल्टी बक्समा केहिकारण लड्न पुगेका थिए। दर्शकको बुझाइ र हेराइमा उनको लड्नुमा डेनमार्कका खेलाडीको गल्ति नदेखिएको कारण यस बिषयलाइ लिएर चौतर्फी चर्चा भैरहेको छ।
धेरैले इंग्ल्याण्डको यो प्रस्तुतिलाइ नराम्रो प्रकिया दिए। भिडियो रेफ्रीले समेत रेफ्रीको उक्त निर्णयलाइ प्रस्न नगरी पेनाल्टी दिएकोमा धेरै विश्लेषकहरुले आपत्ति जनाएका छन्। यूरोको सेमी फाइनल जस्तो ठुलो खेलमा उक्त निर्णय रेफ्रीले फेरी किन हेरेनन् भन्ने प्रस्न उठिरहेको छ। प्रविधि हुदा हुदै त्यत्रो ठुलो निर्णय र नतिजा मध्यनजर नगरी पेनाल्टी दिदा रेफ्री मै प्रस्न चिन्ह उठेको छ।
स्टर्लिङ्गले चाहि त्यस पेनाल्टीमा कुनै दोहोर्याए नभएको कुरामा अन्तरबार्ता अन्तर्गत स्पष्टिकरण दिएका छन। यस अघि पनि धेरैले यसपाली को यूरो इंगलैंड तर्फ झुकेको तर्क राखेका छन्। अघिल्लो समयपनि मौसमको कुरा जनाउदै जर्मनीलाइ राउण्ड अफ १६ खेल अघि प्रशिक्षणमा रोक लगाइएको थियो । इंग्ल्याण्डको १ खेल बाहेक सबै खेल आफ्नै घरेलु मैदानमा भएको कुरालाई पनि धेरैले संकाश्पद नजरले हेर्दै आएका छन। प्रशिक्षण तथा यात्रामा समेत इंग्ल्याण्डको टिमलाइ धेरै सजिलो पर्न गएको छ। जर्मन पत्रिका विल्ड ले पनि यसले गर्दा इंग्ल्याण्डलाइ अरु टोलि भन्दा धेरै फाइदा भएको कुरा जनाएको थियो।
आजको पेनाल्टी लाइ लिएर यस्तो छ पब्लिक को धारणा :
No way that penalty stands if this game isn't at Wembley.
— Manuel Veth (@ManuelVeth) July 7, 2021
Would hazardaguess that less than 50% of refs would have given it, but what we don’t know is exactly what angles they watched in VAR centre in Nyon. That last angle from low down and behind makes it look dubious to say the least. The debate will rage on.
Posted in अन्तरष्ट्रिय फुटबल, फुटबल, मुख्य खबरTagged #england #England vs Denmark #Euro Cup 2020 #Harry Kane
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठ्माण्डौ। बिहिबार भएको खेलमा डेनमार्क बिरुद्द २-१ को जित निकालेको इंग्ल्याण्डको बिरुद्द युइएफएले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। उक्त खेलमा भएका तिन विभिन्न घटना क्रममा इंग्ल्याण्ड दोषी भएको एसोसिइसनको ठम्म्याइ छ। युइएफएले रिलिज गरेको पत्रनुसार ” सेमिफाइनल अन्तर्गत भएको डेनमार्क र इंग्ल्याण्ड बीच भएको खेलमा भएका घटनालाइ लिएर […]
बार्सिलोनाको खराब फर्म जारी, १४औँ स्थानको काडीज संग बराबरीमा रोकियो
एल क्लासिको अघि बार्सिलोनाको शानदार फर्म जारि
प्रेस बिज्ञप्तिमा रोनाल्डोले गरेको ब्यबहारका कारण कोका कोला कम्पनिलाइ भारि नोक्सान !!!